EA Sports Oo Godkeeda Biyo Ugu Soo Galeen, Zlatan
EA Sports ayaa ka jawaabtay su’aal ka timid weeraryahanka AC Milan Zlatan Ibrahimovic kaasoo ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo sababta ay shirkadaan ciyaar gacmeeda FIFA ugu isticmaasho muuqaalkiisa iyo magaciisa.
Falanqeynta kulanka xiisaha leh ee Fulham iyo Manchester United
Habeenkii Isniinta Ibra ayaa ahaa xiddigii ugu danbeeyay ee kubada cagta ee baraha bulshada soo dhiga cabasho ka dhan ciyaar gacmeedka FIFA 21. Laakiin si ka duwan ciyaartoyda kale oo ka cawda qiimeyntooda Ibra wuxuu ka cabanayay sababta uu ciyaar gacmeedka uga soo dhex muuqday.
“Dad ayaa faa’ido ka sameynaya magaceyga iyo wajigeyga iyagoo aan heshiis ila gaarin mudadii sannadaha aheyd. Waxa waqtigii laa baari lahaa.” ayuu Ibrahimovic ku soo qoray Twitter.
Wuxuu qoraalkiisa raaciyay: “Yaa u fasaxay FIFA EA Sport inay isticmaasho magaceyga iyo wajigeyga? FIFPro? Kama warqabo inaan xubin ka ahay FIFPro, haddii aan ka ahayna anigoon ka warqabin ayaa la igu daray iyadoo la adeegsanayo talaabooyin qariib ah. Waa hubaal uma ogolaadeen FIFA ama FIFPro inay lacag iga sameeyaan.”
FIFPro waa ururka ay ku mideysan yihiin ciyaartoyda kubada cagta adduunka, iyadoo EA Sports ay sheegtay inay heshiis kula jirto FIFPro taasna ay sabab u tahay inay isticmaalaan magacyada iyo wajiyada ciyaartoyda kubada cagta.
Waxay u muuqataa in Ibra kaliya uusan aheyn ciyaaryahanka doonaya in la baaro heshiiska FIFPro iyo EA Sports ee ciyaar gacmeedka FIFA.
Gareth Bale ayaa isna Twitter ku soo qoray: “Ibra waa arin xiiso leh… waa maxay FIFPro? Waqtigii la baari lahaa ayaa la joogaa.”
Sida ay sheegtay The Athletic waxaa jira kumanaan ciyaartoy ah oo aan ku qanacsaneyn in muuqaalkooda iyo magacooda loo adeegsado ciyaar gacmeedka FIFA.
axadle 5963 posts
double attack in Minimakanda extends the cycle of violence in the Bankass circle
gather in front of Mamadou Tandja’s home to pay tribute to him